विश्वभर हाल कोरोना संक्रमणको अवस्था के छ ? कति संक्रमित — onlinedabali.com
विश्वभर हाल कोरोना संक्रमणको अवस्था के छ ? कति संक्रमित
काठमाडौँ । विश्वभर माहामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरस हाल सम्म पनि नियन्त्रण हुन सकेको छैन् । दिनप्रतिदिन संक्रमितको सख्याँ बढ्दै गईरहेको छ भने विश्वभर लाखै मानिसहरुले संक्रमण बाट ज्यान गुमाई सकेको छन् ।
आज बिहान सम्मको वल्डोमिटरको तथ्याङक विश्वमा ३ करोड ३२ लाख ९७ हजार ५०३ पुगेको छ । हाल सम्म संसारभर १० लाख बढि मानिसले ज्यान गुमाईसकेको छ ।
पछिल्लो समय नेपालको छिमेकी देश भारतमा कोरोना संक्रमण तिब्र फैलिरहेको छ । गएको २४ घण्टाम त्यहाँ एकैदिन संक्रमणबाट १ हजार ४० जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने हालसम्म ९५ हजार भन्दा बढीले संक्रमणबाट ज्यान गुमाएको छन् ।
हाल भारतमा कूल संक्रमितको संख्या ६० लाख ७३ हजार ३ सय ४८ पुगेको छ । यो देश विश्वमा कोरोना संक्रमित बढि भएको देशको दोस्रो नम्बरमा पर्छ । भारत सहित एसियाली देशहरुमा कूल संक्रमितको संख्या १ करोड छ । एसियाली देशमा हालसम्म ज्यान गुमाउनेको सङख्या ९५ हजार ५७४ पुगेको छ भने निको हुनेको संख्या ८५ लाख ८७ हजारभन्दा बढी रहेको छ ।
त्यसैगरी विश्वमा सबैभन्दा धेरै कोरोना संक्रमितको भएको देश अमेरिकामा हाल ७३ लाख २० हजार ६ सय जना संक्रमित पुगेका छन् । त्यहा २ लाख बढिले संक्रमणबाट ज्यान गुमाईसकेको जोन हप्किन्स बिश्वबिद्यालयको तथ्यांङक रहेको छ । हाल उत्तर अमेरिकामा कोरोना संक्रमितको सख्या ८७ लाख बढि रहेका् छ ।
त्यस्तै गरी संक्रमित बढि भएको तेस्रो नम्बरमा रहेको ब्राजिलमा हाल ४७ लाख ३२ हजार कूल संक्रमित पुगेका छन् । त्यस्तै संक्रमणबाट युरोपेली देशमा हाल सम्म संक्रमितको संख्या ४८ लाख बढि पुगेको छ । त्यस्तै कोरोना संक्रमणबाट मेक्सीकोमा ७६ हजार ४ सय ३०, बेलायतमा ४२ हजार ७७, इटालीमा ३५ हजार ८ सय ३५ जनाको ज्यान गएको छ ।
यो बिचमा नेपालमा पनि भने हाल सम्म ७३ हजार ३ सय ९४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । जस मध्ये हाल सम्म ५३ हजार ८ सय ९८ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् भने ४ सय ७७ जनाको ज्यान गईसकेको छ ।